PressReader - Kwayedza: 2018-11-23 - Tsigirai makoreji ezvekurima: Shiri
Tsigirai makoreji ezvekurima: Shiri
VADZIDZI 94 vepaGwebi Agricultur­al College nguva pfupi yadarika vakawanisw­a zvitupa zvekupedza zvidzidzo zvavo zvekurima.
Pavadzidzi ava, 35 vavo vakanga vari vanhukadzi kuchizoti 59 vari vanhurume.
Vachitaura pachiitiko ichi, gurukota rebazi rinoona nezveminda, kurima, mvura, mamiriro ekunze nekugarisw­a kwevanhu patsva - Retired Chief Air Marshal Perrance Shiri - vanoti makoreji ezvekurima anofanira kubatsirwa nemichina yekurimisa yechizvino-zvino.
“Kuitira kuti vadzidzi vezvekurim­a vabudirire muzvidzidz­o zvavo, vanofanira kuwaniswa michina yekushandi­sa kuti tifambiran­e zvakare neruzivo rwechizvin­o-zvino nekuti mushure medzidzo vachazonop­inda muminda kunoita basa,” vanodaro.
Vanoti Gwebi College iri kuenzanisa mikana pakutora vadzidzi - vanhukadzi nevanhurum­e - izvo zvinofambi­rana nemutemo wenyika.
Vachitaura­wo pagungano iri, Dr William Matizha vanova principal
weGwebi Agricultur­al College vanoti kudzidzisw­a nyaya dzekurima kunobatsir­a zvikuru mukusimudz­irwa kweupfumi hwenyika.
“Chinangwa chedu chegore ra2030 ndechekuon­a kuti varimi vaita mari nekukasika kuburikidz­a nekugona kuita mabhindauk­o anovandudz­a raramo yavo pamwe neruzhinji rwenyika.
“Tinotenda zvikuru nerutsigir­o rwatakawan­iswa nesangano reAfrican Conservati­on Tillage Network (ACT) rwe$12 806 yekusimudz­ira chirongwa chekurima nenzira yemasutso pasi peConserva­tion Agricultur­e for Resilient Food Security and Economic Growth in Africa vachitsigi­rwa nehomwe yeNorad,” vanodaro.
Zvisinei, Dr Matiza vanoti vari kuchema-chema nenhau dzekusakar­a kwaita mimwe michina yavanoshan­disa pakoreji iyi uye kubiwa kwezvinhu zvakasiyan­a.
“Tiri kuramba tichisanga­na nedambudzi­ko rekubirwa chibage nemapango nevanhu vanenge vachitsvag­a huni uye nhau yemoto wesango iri kuparadza goho redu. Kutaura kudai, takabirwa muchina wemadiridz­iro weCentre Pivot uyo takapihwa nekambani yeSyngenta. Midziyo yedu yave nemakore 68 ichishanda inosangani­sira matarakita, motokari, bhazi nemimwe michina izvo zvasakara zvikuru,” vanodaro.
Vanoendere­ra mberi vachiti munda wekoreji iyi uri kushaya mvura yemadiridz­iro sezvo dhamhu repo risisakwan­isi kuchengeta mvura kwemakore mazhinji zvichiteve­ra kusanaya kwemvura nemazvo.
“Tinotenda mushandira­pamwe watiri kuita neveChines­e Agricutura­l Technology Demonstrat­ion Centre pamahekita 50 echibage, 50 esoya bhinzi ne50 egorisi ayo takarima pasi pechirongw­a cheCommand Agricultur­e,” vanodaro.
Dr Matizha vanoti kushoo yeHarare Agricultur­e Show gore rino, koreji yavo yakahwinha mibairo miviri inosangani­sira yekuratidz­ira zvirimwa neyezvipfu­yo.
“Gore rino takwanisa kudzidzisa varimi 350 vaibva kunzvimbo dzakasiyan­a uye pakati pavo 60 vainge vari vemombe avo vaitsigirw­a nesangano reNurture Education Trust. Tine vadzidzi 237 apo chikamu che49 percent chavo vanhukadzi uye 44 vari mugore rekutanga, 66 vari mugore repiri vari kufundira mabasa (attachment) apowo 127 vari mugore retatu,” vanodaro.
Vanoti vadzidzi vakawanisw­a zvitupa vese vari 94 vakapasa nechikamu che100 percent.
Kubva mugore ra1950 pakavambwa koreji iyi kusvika pari nhasi, vadzidzi vawaniswa zvitupa vave 2 514.